Smartphone တွေက သင့်တစ်နေ့တာမှာ အချိန်ကုန်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်နေပြီလား
12 Nov 2018 . 5:19 PM
Smartphone လို့ပြောလိုက်ရင် Smart ဖြစ်တာနဲ့ Phone ဆိုတဲ့ စကားလုံးနှစ်ခုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွဲမြင်သင့်ပါတယ်။ ပေါင်းရေးထားပေမယ့် ခွဲခြားသိထားတာ ပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ?
Smartphone တွေက လူတွေကို ကူညီပေးဖို့၊ အလုပ်တစ်ခု၊ အဆက်အသွယ်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် လိုအပ်ချက်တစ်ခုခုကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ အိတ်ကတ်ထဲကထုတ်ပြီး လက်ထဲမှာတင် မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်လိုက်နိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး Device တွေပါ။ Mini Computer တွေလို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုပြောရလောက်အောင်လည်း Phone တွေက Smart ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်ကတည်းကစပြီး ဖုန်းတွေက လူတွေကြားမှာ ရေပန်းစားလာတာ အခုဆိုရင် Smartphone တွေက လူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်နီးပါးပါပဲ။ Laptop တွေနဲ့ Desktop တွေကို လူတိုင်းမပိုင်ပေမယ့် Smartphone တွေကိုတော့ အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တိုင်း သုံးနေကြပါပြီ။
Smartphone တွေက ပိုပြီးလက်လှမ်းမှီတဲ့ Computer တွေဖြစ်လာတာကြောင့် လူတိုင်းနီးပါးက Laptop တွေထက် ဖုန်းတွေကို အရင်ဝယ်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး Device အနေနဲ့သုံးဖြစ်ကြပြီး ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖုန်းသုံးတဲ့အနေအထားတွေက ပြောင်းသွားပါပြီ။
Devices for Entrainment
ဟုတ်ပါတယ်။ ဖုန်းတွေက ဖျော်ဖြေရေး Device တွေအဖြစ် ကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတဲ့အချိန်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ အိတ်ကတ်တွေထဲမှာ နေရာယူထားကြပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ၊ Video တွေနဲ့ သီချင်းတွေအတွက် ဒီ Screen တွေပေါ်မှာပဲ နာရီပေါင်းများစွာအချိန်ပေးလာကြပါတယ်။ နောက်ပို်င်းမှာ ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်တိုင်ပဲ ရုပ်ရှင်ရုံတွေသွားဖို့နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးဖို့ ပျင်းလာကြတယ်။
လူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပေမယ့် အချိန်တိုင်း Connected ဖြစ်နေဖို့ကြိုးစားမိ၊ လုပ်မိနေရင်း တကယ့်အပြင်မှာ လုပ်စရာရှိတာတွေ၊ လုပ်သင့်တာတွေနဲ့ လုပ်ချင်တာတွေကို မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ အချိန်တွေကုန်လာပါတယ်။ တကယ်တမ်းကတော့ Social Media တွေက ကျွန်တော်တို့ အချိန်တွေကိုလုယူနေတာမဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ကသာ Social Media တွေအပေါ် စွဲလမ်းစိတ်များနေတာပါ။
လူတွေအားလုံးမှာတော့ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေ၊ ခင်မင်သူတွေနဲ့ ဝေးရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အချိန်တွေမှာ Game တွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆော့ဖြစ်တတ်တာက အဖြစ်များတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲ့ဒီကိစ္စကလည်း ကြာလာရင်တော့ ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်လို့ Game တွေက ဖျော်ဖြေရေးအကန့်ထဲမှာပဲ ရှိနေသင့်တာ အမှန်ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့တွေက ဖုန်းတွေကို လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပဲ ကောင်းကောင်း အသုံးချဖို့ထက် အချိန်ပြည့်နီးပါး အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံအတွက် အသုံးပြုဖြစ်နေတာကနေ လက်တွေ့ဘဝမှာ ဟာကွက်တွေဖြစ်လာတတ်သလို စိတ်အလိုမကျတာတွေလည်း ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အနီးနားကလူတွေကို ဂရုမစိုက်ဖြစ်လာတာ၊ ပြင်ပမှာ ကိုယ်တိုင်ခံစားသင့်တာတွေကို ဖုန်း Screen တွေကနေပဲ ကြည့်နေမိတာတွေဖြစ်လာပြီး ဆုံးရှုံးမှန်းမသိ ဆုံးရှုံးတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဖြစ်လာတာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ ချက်ချင်းလုပ်ယူလို့ မရပေမယ့် အချိန်တိုတစ်ခုအတွင်းမှာ ပြုပြင်လို့ရလို့ ဖုန်းတွေကို အနားကနေ ကန်ထုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
Screen ပေါ်က ဖျော်ဖြေရေး Media တွေထက် ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတာတွေ ပြင်ပလောကမှာရှိပါတယ်။ ဖုန်းတွေနဲ့ လုပ်ယူလို့မရတဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကို အပြင်မှာ လက်တွေ့ခံစားတာနဲ့ လူတွေကြားမှာ လူတွေနဲ့အတူစားကြသောက်ကြရင်း စကာစမြည်ပြောရတာတွေက ဖုန်းတွေပေါ်မှာ ကုန်ဆုံးတဲ့အချိန်တွေထက် ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ ပိုပြီး ခံစားမိလာဖို့အတွက် ဖုန်းတွေကို အခုပဲကန့်သတ်ပြီး သုံးလိုက်ရင်ရပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ပြောရတာ လွယ်သလောက် ကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်ကြည့်ရင် ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ အရင်ဆုံးကတော့ ကိုယ်က ဖုန်းပေါ်မှာ ဘယ်အချက်ကို အသုံးအများဆုံးလဲ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေကော လက်တွေ့ဘဝမှာ လုပ်ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာတွေကို စဉ်းစားကြည့်ရပါမယ်။ အဲ့ဒီလို စဉ်းစားကြည့်ပြီးရင်တော့ ဖုန်းတွေက ဘယ်အချက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့လက်တွေပေါ်မှာ အချိန်အကြာကြီးရှိနေရတာလဲဆိုတာ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ နားလည်လာပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်နေရာကစပြီး လျှော့ရမလဲဆိုတာ တွေးမိသွားမှာပါ။ တချို့က Socail Media တွေက တက်လာသမျှ Notificaiton တွေကြောင့် ဖုန်းတွေကို တစ်နာရီအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဖွင့်ကြည့်မိကြသလို၊ တချို့ကလည်း သီချင်းနဲ့ Video တွေကြောင့် ဖုန်းတွေကို Battery မကုန်မချင်း Lock မလုပ်မိကြပါဘူး။ ခရီးထွက်တဲ့အခါ၊ ပွဲလမ်းသဘင်တွေသွားတဲ့အခါမှာလည်း Social Media တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ပျော်စရာအခိုက်အတန့်တွေကို ကိုယ်တိုင် ခံစားမယ့်အစား Camera နဲ့ရိုက်ဖို့ပဲပိုပြီး အာရုံရနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဖြစ်ပြီးမှ ဖုန်းတွေကို ကိုယ်ကသုံးနေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းတွေနဲ့ အရေးမကြီးတာတွေ လုပ်မိနေတာလားဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြားသိမှာပါ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လိုအပ်လို့ ဖုန်းသုံးတယ်လို့ သင့်ကိုယ်သင့် ယုံထားတယ်ဆိုရင် ဒီထဲက အချက်တွေက သင့်အတွက် ကိုက်ညီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ချွင်းချက်အနေနဲ့လည်း Introvert တွေအတွက်တော့ ဖုန်းနဲ့၊ ကွန်ပျူတာတွေက အနီးစပ်ဆုံးသော သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်နေကြဦးမှာပါပဲ။ အခုကစပြီး Smart ဖြစ်တဲ့ Phone တွေကို ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် Smart ကျကျ သုံးဖို့ ပြင်ဆင်သင့်ပါပြီ။
Smartphone တှကေ သငျ့တဈနတေ့ာမှာ အခြိနျကုနျစတေဲ့အရာတှဖွေဈနပွေီလား
Smartphone လို့ပွောလိုကျရငျ Smart ဖွဈတာနဲ့ Phone ဆိုတဲ့ စကားလုံးနှဈခုကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ခှဲမွငျသငျ့ပါတယျ။ ပေါငျးရေးထားပမေယျ့ ခှဲခွားသိထားတာ ပိုအဓိပ်ပါယျရှိပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ?
Smartphone တှကေ လူတှကေို ကူညီပေးဖို့၊ အလုပျတဈခု၊ အဆကျအသှယျတဈခု ဒါမှမဟုတျ လိုအပျခကျြတဈခုခုကို အခြိနျတိုအတှငျးမှာ အိတျကတျထဲကထုတျပွီး လကျထဲမှာတငျ မွနျမွနျဆနျဆနျနဲ့လုပျလိုကျနိုငျဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံး Device တှပေါ။ Mini Computer တှလေို့ပွောရငျလညျး မမှားပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုပွောရလောကျအောငျလညျး Phone တှကေ Smart ဖွဈပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ လေးငါးနှဈကတညျးကစပွီး ဖုနျးတှကေ လူတှကွေားမှာ ရပေနျးစားလာတာ အခုဆိုရငျ Smartphone တှကေ လူတှအေတှကျ မရှိမဖွဈနီးပါးပါပဲ။ Laptop တှနေဲ့ Desktop တှကေို လူတိုငျးမပိုငျပမေယျ့ Smartphone တှကေိုတော့ အရှယျရောကျပွီးသားလူငယျတိုငျး သုံးနကွေပါပွီ။
Smartphone တှကေ ပိုပွီးလကျလှမျးမှီတဲ့ Computer တှဖွေဈလာတာကွောငျ့ လူတိုငျးနီးပါးက Laptop တှထေကျ ဖုနျးတှကေို အရငျဝယျဖို့ဖွဈလာပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ အဓိကအခကျြဖွဈတဲ့ ဆကျသှယျရေး Device အနနေဲ့သုံးဖွဈကွပွီး ဒီနောကျပိုငျးမှာတော့ ဖုနျးသုံးတဲ့အနအေထားတှကေ ပွောငျးသှားပါပွီ။
ဟုတျပါတယျ။ ဖုနျးတှကေ ဖြျောဖွရေေး Device တှအေဖွဈ ကြှနျတျောတို့သတိမထားမိတဲ့အခြိနျကတညျးက ကြှနျတျောတို့ အိတျကတျတှထေဲမှာ နရောယူထားကွပါတယျ။ ဓာတျပုံတှေ၊ Video တှနေဲ့ သီခငျြးတှအေတှကျ ဒီ Screen တှပေျေါမှာပဲ နာရီပေါငျးမြားစှာအခြိနျပေးလာကွပါတယျ။ နောကျပျိုငျးမှာ ကြှနျတျောတို့တှကေိုယျတိုငျပဲ ရုပျရှငျရုံတှသှေားဖို့နဲ့ သူငယျခငျြးတှေ၊ ဆှမြေိုးတှနေဲ့ အခြိနျကုနျဆုံးဖို့ ပငျြးလာကွတယျ။
လူတှနေဲ့ ဆကျသှယျဖို့ဆိုတာ အရေးကွီးတဲ့အခကျြဖွဈပမေယျ့ အခြိနျတိုငျး Connected ဖွဈနဖေို့ကွိုးစားမိ၊ လုပျမိနရေငျး တကယျ့အပွငျမှာ လုပျစရာရှိတာတှေ၊ လုပျသငျ့တာတှနေဲ့ လုပျခငျြတာတှကေို မလုပျနိုငျတော့ဘဲ အခြိနျတှကေုနျလာပါတယျ။ တကယျတမျးကတော့ Social Media တှကေ ကြှနျတျောတို့ အခြိနျတှကေိုလုယူနတောမဟုတျဘဲ ကြှနျတျောတို့ကသာ Social Media တှအေပျေါ စှဲလမျးစိတျမြားနတောပါ။
လူတှအေားလုံးမှာတော့ တဈယောကျတညျးဖွဈနတေဲ့အခြိနျတှေ၊ ခငျမငျသူတှနေဲ့ ဝေးရာကိုရောကျနတေဲ့အခြိနျတှေ ရှိတတျပါတယျ။ အဲ့ဒီလို အခြိနျတှမှော Game တှကေို စှဲစှဲမွဲမွဲ ဆော့ဖွဈတတျတာက အဖွဈမြားတဲ့ကိစ်စတဈခုလို ဖွဈနပေါပွီ။ အဲ့ဒီကိစ်စကလညျး ကွာလာရငျတော့ ကောငျးတဲ့အရာမဟုတျလို့ Game တှကေ ဖြျောဖွရေေးအကနျ့ထဲမှာပဲ ရှိနသေငျ့တာ အမှနျပါပဲ။
ကြှနျတျောတို့တှကေ ဖုနျးတှကေို လိုအပျတဲ့နရောမှာပဲ ကောငျးကောငျး အသုံးခဖြို့ထကျ အခြိနျပွညျ့နီးပါး အကွောငျးပွခကျြမြိုးစုံအတှကျ အသုံးပွုဖွဈနတောကနေ လကျတှဘေ့ဝမှာ ဟာကှကျတှဖွေဈလာတတျသလို စိတျအလိုမကတြာတှလေညျး ဖွဈလာတတျပါတယျ။ အနီးနားကလူတှကေို ဂရုမစိုကျဖွဈလာတာ၊ ပွငျပမှာ ကိုယျတိုငျခံစားသငျ့တာတှကေို ဖုနျး Screen တှကေနပေဲ ကွညျ့နမေိတာတှဖွေဈလာပွီး ဆုံးရှုံးမှနျးမသိ ဆုံးရှုံးတာတှေ ဖွဈလာပါတယျ။ အဲ့ဒီလို ဖွဈလာတာတှကေို ဖွရှေငျးဖို့ကတော့ ခကျြခငျြးလုပျယူလို့ မရပမေယျ့ အခြိနျတိုတဈခုအတှငျးမှာ ပွုပွငျလို့ရလို့ ဖုနျးတှကေို အနားကနေ ကနျထုတျပဈနိုငျပါတယျ။
Screen ပျေါက ဖြျောဖွရေေး Media တှထေကျ ပိုပြျောဖို့ကောငျးတာတှေ ပွငျပလောကမှာရှိပါတယျ။ ဖုနျးတှနေဲ့ လုပျယူလို့မရတဲ့ ဖနျတီးမှုတှကေို အပွငျမှာ လကျတှခေံ့စားတာနဲ့ လူတှကွေားမှာ လူတှနေဲ့အတူစားကွသောကျကွရငျး စကာစမွညျပွောရတာတှကေ ဖုနျးတှပေျေါမှာ ကုနျဆုံးတဲ့အခြိနျတှထေကျ ပြျောဖို့ကောငျးတယျဆိုတာ ပိုပွီး ခံစားမိလာဖို့အတှကျ ဖုနျးတှကေို အခုပဲကနျ့သတျပွီး သုံးလိုကျရငျရပါပွီ။
ဒါပမေယျ့ ပွောရတာ လှယျသလောကျ ကိုယျတိုငျလိုကျလုပျကွညျ့ရငျ ခကျခဲနပေါလိမျ့မယျ။ အရငျဆုံးကတော့ ကိုယျက ဖုနျးပျေါမှာ ဘယျအခကျြကို အသုံးအမြားဆုံးလဲ၊ ကိုယျလုပျခငျြတာတှကေော လကျတှဘေ့ဝမှာ လုပျဖွဈရဲ့လားဆိုတာတှကေို စဉျးစားကွညျ့ရပါမယျ။ အဲ့ဒီလို စဉျးစားကွညျ့ပွီးရငျတော့ ဖုနျးတှကေ ဘယျအခကျြကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့လကျတှပေျေါမှာ အခြိနျအကွာကွီးရှိနရေတာလဲဆိုတာ နားလညျလာပါလိမျ့မယျ။ နားလညျလာပွီဆိုရငျတော့ ဘယျနရောကစပွီး လြှော့ရမလဲဆိုတာ တှေးမိသှားမှာပါ။ တခြို့က Socail Media တှကေ တကျလာသမြှ Notificaiton တှကွေောငျ့ ဖုနျးတှကေို တဈနာရီအတှငျး အကွိမျကွိမျ ဖှငျ့ကွညျ့မိကွသလို၊ တခြို့ကလညျး သီခငျြးနဲ့ Video တှကွေောငျ့ ဖုနျးတှကေို Battery မကုနျမခငျြး Lock မလုပျမိကွပါဘူး။ ခရီးထှကျတဲ့အခါ၊ ပှဲလမျးသဘငျတှသှေားတဲ့အခါမှာလညျး Social Media တှရေဲ့ လှမျးမိုးမှုကွောငျ့ ပြျောစရာအခိုကျအတနျ့တှကေို ကိုယျတိုငျ ခံစားမယျ့အစား Camera နဲ့ရိုကျဖို့ပဲပိုပွီး အာရုံရနတေတျကွပါတယျ။ ဒီအခကျြတှကေို ကိုယျတိုငျစဉျးစားဖွဈပွီးမှ ဖုနျးတှကေို ကိုယျကသုံးနတောလား၊ ဒါမှမဟုတျ ဖုနျးတှနေဲ့ အရေးမကွီးတာတှေ လုပျမိနတောလားဆိုတာ ကှဲကှဲပွားပွားသိမှာပါ။
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ လိုအပျလို့ ဖုနျးသုံးတယျလို့ သငျ့ကိုယျသငျ့ ယုံထားတယျဆိုရငျ ဒီထဲက အခကျြတှကေ သငျ့အတှကျ ကိုကျညီမှာမဟုတျပါဘူး။ ခြှငျးခကျြအနနေဲ့လညျး Introvert တှအေတှကျတော့ ဖုနျးနဲ့၊ ကှနျပြူတာတှကေ အနီးစပျဆုံးသော သူငယျခငျြးတှေ ဖွဈနကွေဦးမှာပါပဲ။ အခုကစပွီး Smart ဖွဈတဲ့ Phone တှကေို ကြှနျတျောတို့ကိုယျတိုငျ Smart ကကြ သုံးဖို့ ပွငျဆငျသငျ့ပါပွီ။